Bountysource: Madal Maalgelinta loogu talagalay Barnaamijka Furan ee Isha | Laga soo bilaabo Linux
Mararka kale, Blog-ka waxaan uga hadalnay arrinta ah Sidee loo maalgeliyaa Barnaamijka Bilaashka ah iyo Bilaashka ah? y Sidee loogu noolaadaa sameynta softiweer bilaash ah iyo ilo furan?. Xaqiiqdiina, maahan oo keliya mowduuc ballaadhan, laakiin waa mid muran badan oo badanaa xitaa xaaraan ah, qaar ka mid ah.
Si kastaba ha noqotee, maanta ayaa loo jeedaa in la ogaado mid ka mid ah xulashooyinka badan ee lagu gaari karo tan u xiisay "dhamaadka", maxaa ku nool xamaasad isaga loo qabo Software bilaash ah iyo ilo furan. Xulashadan waxaa loo yaqaan: Isha Bounty.
Ka hel Maalgelinta Ilaha Furan
Waxaa habboon in la muujiyo markii ugu horraysay ee aaggan wax laga qabto, iyo ka hor intaan si buuxda loo gelin mawduuca Isha Bounty, in qofna uusan qarsoodi ahayn, in markay tahay sameynta barnaamijyo, dukuminti ama taageero, ee ama loogu talagalay, ah Software bilaash ah iyo ilo furan, gaar ahaan loogu talagalay GNU / Linux, inbadan oo naga mid ah ayaa la wacay iyo inbadan oo inaga mid ah oo caawiya. Illaa iyo hadda si wanaagsan oo qof walba oo faraxsan.
Sidoo kale inbadan ama dhamaanteen waan ognahay, in gudaha World of lahaansho, xiran iyo Software ganacsi badanaa waxay umuuqdaan kuwo wanaagsan oo bulsho ahaan la aqbalay «Ku noolow barnaamijka softiweerka ah ee la sameeyay ama la sameeyay», heer ganacsi iyo heer shaqsiyeed labadaba.
Si kastaba ha noqotee, badanaa isku mid maahan, ee Caalamka oo bilaash ah oo furan, tan iyo, heer shaqsiyeed iyo mid bulsho inta badan waxaa jira tab iyo diidmo fara badan, oo dhinaca qaar ka mid ah, awgood fasiraad qaldan ee maxaa wax kasta oo bilaash ah oo furan waa inay ahaadaan bilaash ama bilaa kharash. In kasta oo, nasiib wanaag, heerka ganacsiga ay jirto baahi sare iyo taageero loo qabo xirfadleyda aaggan ka mid ah Software.
Iyo si aanan ugu sii ballaadhin tan, ka dib markaan dhammeeyo akhriska daabacaadan, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso 2 qoraal hore oo la xiriira ku saabsan faallooyinka, taasi waa, sida ku saabsan Sidee loo maalgeliyaa Barnaamijka Bilaashka ah iyo Bilaashka ah? y Sidee loogu noolaadaa sameynta softiweer bilaash ah iyo ilo furan?:
Dood: Ku deeqo ama ha ku deeqin! Tani waa jahwareerka. Ha u oggolaan Software-ka Bilaashka ah iyo Dukumeentiyada Bilaashka ah inay dhintaan. Wax bilaash ah ma waarayaan!
1 Bountysource: Taageero loogu talagalay barnaamijyada furan ee furan
1.1 Waa maxay Bountysource?
1.2 Waa maxay noocyada mashaariicda loo oggol yahay Bountysource?
1.3 Sidee Bountysource u shaqeysaa?
1.3.1 Abaalmarinta (Abaalmarinta)
1.3.2 Ololaha Cusbada
1.4 Beddelka Bountysource
Bountysource: Taageero loogu talagalay barnaamijyada furan ee furan
Waa maxay Bountysource?
In uu degel rasmi ah, waxay leedahay sharraxaadda soo socota:
"Bountysource waa madal maaliyadeed furfuran oo lagu maalgeliyo barnaamijyada. Isticmaalayaashu waxay horumarin karaan mashaariicda il furan ee ay jecelyihiin iyagoo abuuraya / uruurinaya abaalmarinno una ballan qaadaya lacag ururin".
Waa maxay noocyada mashaariicda loo oggol yahay Bountysource?
"Nooc kasta oo ka mid ah ilaha furan ama barnaamijyada softiweer ee bilaashka ah waa la ogol yahay. Guud ahaan, dhammaan rukhsadaha softiweer ee ay ansixisay Hindisaha Open Source Initiative ama Free Software Foundation waa la aqbalaa.".
Sidee Bountysource u shaqeysaa?
Mashruucani wuxuu bixiyaa laba hanaan oo waaweyn oo loogu talagalay maalgelinta mashruuca iyo abuurista faa'iidada, kuwan waa:
Nidaamkan, adeegsadayaasha barmaamijka waxay ku maalgeliyaan abaalmarinta mowduucyada furan ama muujinta codsiyada ay doonayaan in wax laga qabto. Kadibna isticmaaleyaasha kale, kuwa horumariya ama aan ahayn, waxay sii wadaan inay abuuraan xalal codsiyada la yiri, oo markaa la xiro si looga dalbado abaalmarinta u dhiganta Platform-ka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira kafaala qaadayaal aqbali kara ama diidi kara codsiyada ama xalka. Marka, haddii la aqbalo, Bountysource waxay abaalmarinta u siisaa isticmaaleha xalka keena.
Qorshahan, adeegsadayaasha Platform-ka waxay abuurayaan codsi (hawl / mashruuc) ka dibna sheeganaya lacagaha lagu soo ururiyey gudaheeda. Faa'iidada arrintan la xiriirta ayaa ah in Platform-ku uu u oggolaanayo dadka isticmaala GitHub (kooxaha / ururada) in si otomaatig ah loogu abuuro kooxo ka tirsan Bountysource. Sidaa darteed, waxaa loo baahan yahay oo keliya in la faafiyo warka ku saabsan ololaha maalgelinta oo la sugo inta la ururinayo lacagaha, iyada oo loo marayo ballanqaadka soo noqnoqoshada ama bixinta hal mar ee isticmaaleyaasheeda.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan degelkan, waxaad ka heli kartaa xiriiriye soo socda: Bountysource FAQ.
Hadaad rabto inaad ogaato mashaariic la mid ah Bountysource Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso qoraaladayada laxiriira midkasta:
Xs: koodh - Mashruuca lacag-bixinta ee mashaariicda laga helo ilaha furan
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Bountysource», madal maaliyadeed furfuran oo lagu maalgeliyo softiweerka, aadna ugu eg IssueHunt y Xs: koodh; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Bountysource: Madal Maalgelinta loogu talagalay Barnaamijka Furan ee Source
Hackers waxay ka xadeen koodhka ilaha wakaaladaha dawlada Mareykanka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay